Bixinta caalamiga ah: hel LG G6 bilaash ah | Androidsis
Bixinta caalamiga ah: hel LG G6 bilaash ah
Jose Alfocea | | Dood-wadaag, Noticias
Waxaan usbuuca ku bilaabaynaa warar ay inta badan adeegsadayaashu jeclaan doonaan maxaa yeelay haddii aad ka fakaraysay inaad cusboonaysiiso taleefankaagii hore laakiin jiilaalka Sebtember aad buu u soo kordhayaa, hadda waxaad fursad u haysataa inaad hel LG G6 cajiib ah gebi ahaanba bilaash.
LG G6 ayaa ah shirkad caan ka ah South Korea shirkad isla magac ah. Waxaa la daahfuray bishii Maarso ee la soo dhaafay, terminalkan wuxuu leeyahay shaashad 5.7-inch IPS oo leh xalka 2880 x 1440 oo leh ilaalinta Corning Gorilla Glass 3, processor Snapdragon 821, 4 GB, 32/64 GB oo keyd ah, Android 7.1 Nougat lakabka hoostiisa, Optimus UX 6.0, 13 MP dual camera iyo 3300 mAh baytariga oo ah astaamaha ugu fiican. Haddana wejigaaga ayey ku lahaan kartaa.
LG G6 bilaash ah
Sida caadiga ah toddobaad kasta, ragga ka socda Android Authority waxay bilaabeen lacag bixin cusub oo markan waxaad fursad u leedahay inaad hesho midka cusub LG G6 gabi ahaanba waa bilaash.
Isku aadka ayaa ah caalami ah Marka, meel kasta oo aad ku nooshahay, waad awoodi doontaa inaad kaqeyb gasho oo aad fursad u yeelato inaad noqoto guuleystaha cusub, ama guuleystaha. Si tan loo sameeyo, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah booqo websaydhka bixinta kaas oo lagu sameeyo nidaamka gleam.io. Xusuusnow inaad ka qayb geli karto oo keliya hal cinwaan e-mayl (ha iloobin in aqoonsigaaga la xaqiijiyo haddii aad guuleysato, sidaa darteed guushaada waa la burin karaa haddii la ogaado inaad khiyaantay) laakiin beddelkeeda waxaad heli kartaa saamiyo badan. Iyo kaqeybgalka badan, fursadaha badan ee guuleysiga. Tusaale ahaan, maalin kasta waad daabici kartaa tweet-ka isku aadka, waxaadna heli doontaa gelitaan cusub; Sidoo kale markasta oo aad la wadaagto waxaad heli doontaa kaqeybqaadasho kale. Sidan oo kale, fursadaha guuleysiga ayaa sii kordhaya.
Tartanku wuxuu socon doonaa usbuuca oo dhan sidaa darteed luck nasiib wacan !!!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Bixinta caalamiga ah: hel LG G6 bilaash ah
Waxaan jeclaan lahaa inaan kaqeybqaato asxaabta
Jawaab Jorge Fuentes Jiménez
Waxaan rabaa inaan kaqeyb galo !, Mahadsanid
Jawaab Dimar Escalona A
weyn waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysto nasiib dhamaan XD
Jawaab francisco javier sanchez lopez
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo taleefanka gacanta ee wacan !!!
Jawaab ku bixi maal gashiga Cristian mogollon
Waxaan rabaa inaan kaqeybgalo isku aadka taleefanka gacantas qurxoon !!!
Jawaab Saul Torres Equihua
Waxaan jeclaan lahaa inaan kaqeyb galo tartanka loogu talagalay taleefan gacmeedka quruxda badan!
Nasiib wacan!!! Taas awgeed waxaan kugu wargalinaynaa dalacsiintaan, si aad u ogaatid iyaga oo aad fursad ugu hesho kaqeybgalka iyo, si ka wanaagsan, haddana, guuleysto Nasiib!
Wagner Caceres Lobaton dijo
Fursad aad u fiican oo aad ku yeelato LgG6. Waxaan rajeynayaa nasiib.
Jawaab Wagner Cáceres Lobatón
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto taleefanka gacanta maaddaama aanan haysan fursad dhaqaale oo aan ku helo, mahadsanid
Ku jawaab Ivette vazquez
Waxaan rajeynayaa in nasiibku ila jiro
Jawaab Cesar Chaparro magan
Waxaan rajeynayaa inaan nasiib yeesho oo aan noqdo deyn kooxdan oo aan ku raaxeysto wax cusub
Waxaan jeclaan lahaa inaan ku guuleysto taleefanka gacanta
Fadlan i taabo haha ​​!! ... Waxaan haystaa 640xl lumia muddo 2 sano ah oo talooyinka laga jabiyay nabarrada oo aad ayay u gaabisaa waxaanan doonayay inaan qabto moobaylkan
Elephone P8 Mini, falanqeyn iyo ra'yi